August 2021 - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Isibalo sabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika sinyuke ngo-1.8 percentage points safinyelela ku-34.4% ngekota yesibili yango-2021. Ngokusho kweStatistics South Africa, lesi yisibalo esikhulu kunazo zonke seloku kwaqalwa ukuhlaziya lezi zibalo ngo-2008. Isibalo sabantu abasebenzayo sehle ngo-54 000, safinyelela ku-14.9 million. Esabantu abangasebenzi sinyuke ngo-584 000, safinyelela ku-7.8m kanti esabaphelelwe wumdlandla wokufuna umsebenzi sinyuke ngo-186 000
Izikhulu zeTransnet bezihlangane nezikhulu zeMinerals Council SA noNgqongqoshe wamaBhizinisi kaHulumeni uMnu uPravin Gordhan ukuxoxa ngezinselelo ezikhona ekusebenzisaneni kwabo. Bavumelane ngokuthi ukuzama ukulungisa isimo kuzosungulwa amakomidi azobhekelela imikhiqizo ehlukene, bazobonisana kangcono uma kufanele kube khona izindawo ezivalwayo ukuze zilungiswe. Okunye bazosebenzisana ukuzama ukuvuselela izinto uma kukhona umzila ophazamisikile nokubhekana nenkinga yokuntshontshwa kwezintambo zojantshi
U-Woolworths uthe imali engenile ngonyaka wezimali ophele mhla ka-27 ngoJuni inyuke ngo-9.1% yafinyelela kuR78.8 billion. Inzuzo ingakabanjwa intela inyuke ngo-267.3% yafinyelela kuR5.2bn. Inzuzo ngesheya inyuke ngo-647.6% yafinyelela ku435.1 cents
I-Italtile imemezele ukuthi imali engenile ngonyaka wezimali ophele mhla ka-30 ngoJuni inyuke ngo-25% yafinyelela kuR11.6 billion. Inzuzo inyuke ngo-70% yafinyelela kuR2.6bn, kwathi inzuzo ngesheya inyuke ngo-80% yaba wu-140.7 cents
I-BLACK Business Council iqoke ubuholi obusha emhlanganweni wayo oba khona njalo ngemva kweminyaka emithathu. Umengameli wayo omusha wuMnu u-Elias Monage, kuthi amaphini akhe wuMnu uGregory Mofokeng noNksz uYvonne Maitin, ophethe uphiko lwemigomo wuMnu uTilson Manyoni bese umgcinimafa-jikelele kube wuNksz uTsakani Nkambule.
I-DISCOVERY imemezele ukuthi isiqoke uNksz uMonhla Hlahla ebhodini yayo yabaqondisi. Uzoqala kusukela mhla ka-15 ku-Agasti. UNksz uHlahla ngomunye wabaholi bamabhizinisi abahlonishwayo eNingizimu Afrika. Uke waba yisikhulu esiphezulu se-Airports Company South Africa.
I-MTN ibike ukuthi imali engenile inyuke ngo-20% yafinyelela kuR86.7 billion ngesigamu sokuqala sonyaka wezimali esiphele mhla ka-30 kuJuni. Inzuzo engenile ngesheya yehle ngo-78%, yafinyelela ku-148 cents isheya. Ithe into ebe yimbangela ekwehleni kwale nzuzo wukubheda kohlelo eYemen.
I-Distell iphinde yakhumbuza abanesabelo kuyona ukuthi izingxoxo phakathi kwayo neHeineken N.V. zisaqhubeka. I-Heineken N.V. yamemezela ukuthi ifisa ukuthenga isabelo esikhulu sale nkampani yotshwala
Inzuzo yeNedbank inyuke ngo-148% yafinyelela kuR5.3 billion ngesigamu sokuqala konyaka esiphele ngoJuni 30 uma iqhathanisa nohhafu wokuqala wango-2020. Nokho ithe le nzuzo ingaphansi ngo-24% uma kuqhathaniswa nesigamu sokuqala sango-2019. Leli bhange lithe kuselukhuni ukuqagula ukuthi kuzokwenzakalani emnothweni kodwa lithe selilindele ukuthi umnotho wezwe ukhule ngo-4.2% esikhundleni sika-5% ngenxa yokucekela phansi impahla nokutapa ngenyanga edlule nokuvalwa kwezwe ngokwesigaba sesine ngenxa yeCOVID-19
UNksz uNoluthando Chisane, umsunguli we-Uthando Glow Skin Care, yaseThekwini, KwaZulu-Natali
UKUKHULA enomzimba omubi namabala abenza angabukeki yikona okugqugquzele umsunguli wenkampani yezimonyo.
I-SA Corporate Real Estate ithe umonakalo owenzekile ezakhiweni zayo ngenxa yezibhelu zangenyanga edlule ulinganiselwa kuR558.2million uma kuhlanganiswa nemali ebalahlekele ngoba ingangenanga. Ithe umshwalense enawo kwiSasria uzokwazi ukuzikhokhela zonke lezi zindleko ezilingana no-3.1% wenani layo yonke impahla abanayo. Bathe ngaphandle kwaseValue Centre eSpringfield, eThekwini, lapho umonakalo waba mkhulu khona, zonke ezinye izindawo sezivuliwe. Ezinye zizovulwa ngokuphelele ngo-Okthoba nonyaka. Ukulungiswa kweValue Centre eSpringfield, eThekwini, kulindeleke ukuthi kuphothulwe ngo-Okthoba 2022.
USESULILE obeyisikhulu esiphezulu se-Adapt-IT uMnu uSibusiso Shabalala. UShabalala ubecele ukuhlaba ikhefu lezinyanga ezintathu ngoMeyi ngoba kunezinto ayedinga ukuzilungisa. UNksz uTiffany Dunsdon uzoqhubeka abambe njengesikhulu esiphezulu kuze kuvalwe isikhala sikaShabalala.
UXolile ‘uZion’ Vilakazi wumbhali nomhayi wezinkondlo zesiZulu nomnikazi wenkampani yezobuciko Usiba Media. Useke wahaya izinkondlo zakhe eNingizimu Afrika naseSwatini. Unencwadi ethi Intaba YaseSiyoni Yokuqala
Yebo. Ngangiphiwa imali ngoba ngangingakuthandi ukudla. Umama wayengipha uR5 noma uR2 uma ngiqeda ukudla. Ubaba wayevame ukungipha imali eningi, ikakhulukazi ngenkathi sengenza uGrade 7. Wayenginika imali ethi ayibe la kuR1 000. Ngiyakhumbula nje ukuthi ngelinye ilanga umama wanginika imali ngaqala ngayo ibhizinisi, ngithengisa ugwayi, ngaphinde ngenza imali ngokulanda izingane enkulisa, abazali balezo zingane babengikhokhela uR5 (ngesonto).
UNkk uGugu Bhengu, umnikazi weGugu’s Mobile Boutique, eyenza imikhiqizo ehlotshiswe ngobuhlalu yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Ibhizinisi lomsebenzi wezandla selimhambise laze lamfaka ebukhosini bamaNgisi ohlobisa ngobuhlalu. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
UMSEBENZI wezandla wawuyingxenye yezemfundo eminyakeni edlule. Abafundi babefundiswa ukuthunga neminye imisebenzi yezandla njengokuluka amacansi nokuthunga esifundweni i-home economics.
Imishini yokukhipha imali ecekelwe phansi ngezibhelu zokutapa izolungiswa
Osomabhizinisi abancane abakhahlanyezwe yizibhelu bazolekelelwa ngemali engafinyelela kuR2m ibhizinisi ngalinye. USLINDILE KHANYILE uyabika
UMNYANGO wezokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane ukhuthaza amabhizinisi akhahlanyezwe yizibhelu ezisanda kwenzeka ukuthi afake izicelo zokusizwa ukuthi avuselele amabhizinisi awo.
UNksz uPuleng Sekekete, umsunguli weDinako Wines, nongomunye wabanikazi beDintle Chocolate yaseGoli, eGauteng
Uthando lwamabhizinisi lwenze waqala iwayini noshokoledi okuthi yena. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
UCHAZE uthando analo ngewayini njengesikhali asisebenzisele ukunqoba zonke izithiyo ebezenza ukuthi angakwazi ukungena kwezamabhizinisi.
Luyancomeka usizo oluqhamuke noMboweni nethimba lakhe, kuloba uBusi Mavuso
WAZE wasinyakazisa uJulayi eNingizimu Afrika. Sibophe owayengumengameli wezwe, savimba abebezama ukuqumba phansi izwe kanti manje sesinamacebo acacile azolekelela ukubhekana nomphumela wodlame nokutapa, hhayi nje okwesikhashana kodwa nangomuso. Lawa ngamacebo athembisa ikusasa elingcono okuzokhula kulo umnotho.
Kubaluleke ngani ukukhuthaza izisebenzi zakho, kuloba uNtokozo Biyela
KULE ngosi ngithanda sibheke ukuthi kubaluleke ngani ukukhuthaza abasebenzi bakho ngokwakha ubudlelwano phakathi kwezisebenzi, phecelezi i-teambuilding.
UMnu uNkosana Mtimkulu, ophakathi, nezinye zezisebenzi zaseSouth Western Dairy
Bangabalimi abazibophezele ukuguqula imboni yemikhiqizo eyenziwa ngobisi ukuze kwande abantu abamnyama kuyona. Oyedwa wabo uxoxe noTEBOGO MOKWENA
UKUKHIQIZA ubisi kwakunganele ukukhulisa ibhizinisi lomndeni nokungakho banabela nakweminye imikhiqizo yobisi. Kusukela bayiqala iSouth Western Dairy ngo-2010 sebenanefemu eTshwane, eGauteng.
Uhlobo lwempesheni oluthathayo ludinga ukucatshangisiswa
Abantu kumele bangacabangeli inamhlanje kuphela uma sebeya empeshenini ngoba kulula ukuthi imali isheshe iphele. USLINDILE KHANYILE uyabika
ABANTU abaningi abasuke sebethatha umhlalaphansi eNingizimu Afrika bakhetha uhlobo lwempesheni oluthembele kakhulu ekutheni kwenzakalani ezimakethe zemali ngoba basuke becabangela imanje kunokubheka okuzobasiza ngomuso futhi kuqinisekise ukuthi banempesheni ezobanakekela impilo yabo yonke.
UMnu uMpumelelo Zikalala ucacisa ukuthi uthini umthetho ngokugomela iCOVID-19
Ngemva kwezibhelu zokutapa nokucekela impahla phansi, iFNB iqale ukuletha ama-ATM namagatsha angomahambanendlwana KwaZulu-Natali naseGauteng. Iqale eDalton naseHarding eKZN kanti amanye azoyiswa eVosloorus, eSebokeng, eDiepkloof nase-Orange Farm eGauteng. UNksz uLee-Anne van Zyl, isikhulu esiphezulu seFNB Points of Presence, sithe: “Izinhlelo zethu eziphuthumayo bezibheke kuma-ATM ukusiza imiphakathi nabahola isibonelelo seSASSA kanti sizovula namagatsha angomahambanendlwana maduze. Sisebenzisana namanye amabhange, sizoqinisekisa ukuthi amakhasimende asebenzisa ama-ATM ethu awakhokhi inhlawulo yeSaswitch. Sikholwa wukuthi le mizamo izosiza imiphakathi ngenkathi siqhubeka nokuvuselela ingqalasizinda ecekelwe phansi.”
UNkk uZinhle Dlamini, omunye wabasunguli beGenovate, inkampani yezobuchwepheshe
Basungule inkampani ezinikele ekufundiseni izingane ngobuchwepheshe besimanje ukuze zibe namakhono ayinyama. Omunye wabo uxoxe noSLINDILE KHANYILE
UKUBONA igebe phakathi kwendlela izingane ezifundiswa ngayo ezikoleni nanamakhono adingwa yizimboni ngenxa yobuchwepheshe besimanje, ikakhulukazi embonini yezokukhiqiza yikona okubavule amehlo.
UNksz uNjabulo Sithole, isikhulu esiphezulu se-Omame Investments
Ukhuliswe yinto engathathwa njengemqoka ekuphatheni amabhizinisi olawula enye yezinkampani zabesifazane ezinkulu eNingizimu Afrika. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
ISELULEKO asinikwa wuthisha wasenyuvesi esamkhuthaza ukuthi angazishintshi into ayiyona okungukuba wumuntu olungile futhi ozothile yisona asisebenzisa ukuthi akhule emkhakheni wokwelapha abantu ngomphefumulo nangengqondo, i-psychology.
YINI I-INDIRECT TAX?